Yoɛl 1 ASCB – Иоиль 1 CARST | Biblica
Yoɛl 1 ASCB – Иоиль 1 CARST
1Awurade asɛm a ɛbaa Petuel babarima Yoɛl so nie.
Ɛda A Ntutummɛ No Bɛba
2Montie saa asɛm yi, mo mpanimfoɔ;
montie, mo a mote asase no so nyinaa.
Asɛm bi a ɛte sɛi asi mo mmerɛ so
anaa mo mpanimfoɔ mmerɛ so pɛn?
na wɔn mma nso nka nkyerɛ awoɔ ntoatoasoɔ a ɛdi soɔ no.
4Deɛ ntutummɛ kuo no gyaeɛ no
ntutummɛ akɛseɛ no awe
deɛ ntutummɛ akɛseɛ no gyaeɛ no
ntutummɛ nkumaa no awe
deɛ ntutummɛ nkumaa no gyaeɛ no
ntutummɛ afoforɔ awe.
5Mo asabofoɔ, monyane, na monsu!
Mo a monom bobesa nyinaa, montwa adwo;
montwa adwo ɛfiri sɛ nsã foforɔ no
wɔayi afiri mo ano.
6Ɔman bi atu mʼasase so sa
ɛdɔm a wɔyɛ den na wɔntumi nkane wɔn;
na wɔwɔ gyatabereɛ sebɔmmɔfoɔ.
7Wɔasɛe me bobe
agya ne mman a ayɛ fitaa hɔ.
8Di awerɛhoɔ sɛ ababaawa a ɔfira ayitoma
na ɔresu ne kunu a ɔwaree no ne mmabaawaberɛ mu.
9Aduane ne ahwiesa afɔrebɔdeɛ,
wɔayi afiri Awurade efie.
Asɔfoɔ no retwa adwoɔ,
asase no so awo wesee
aduane no asɛe
nsã foforɔ no awe
11Mo ani nwu, mo akuafoɔ,
mo ntwa adwo, mo a modua bobe;
Monsi apinie mma ayuo ne atokoɔ,
ɛfiri sɛ otwaberɛ no asɛe.
12Bobe no akusa
Ateaa nnua, mmɛdua, aperɛ ne
nnua a ɛwɔ mfuo no so nyinaa ahye.
Nokorɛm, anigyeɛ a nnipa wɔ no
13Momfira ayitoma na monni awerɛhoɔ, Ao asɔfoɔ;
mo a mosom afɔrebukyia anim, montwa adwo.
Momfira ayitoma mmɛsiri pɛ
mo a mosom Onyankopɔn anim;
ɛfiri sɛ aduane ne ahwiesa afɔrebɔdeɛ no
ɛto atwa wɔ Onyankopɔn efie.
14Mommɔ mmuadadie kronkron ho dawuro;
mmra Awurade mo Onyankopɔn efie
na wɔmmesu mfrɛ Awurade.
15Ɛda no aba!
Awurade ɛda no abɛn;
Ɛbɛba sɛ ɔsɛeɛ a ɛfiri Otumfoɔ hɔ.
16Yɛnnhunuu sɛ aduane ho ayɛ na,
sɛ anigyeɛ ne ahosɛpɛ nso to atwa
wɔ yɛn Onyankopɔn efie anaa?
17Aba no wu wɔ asase wesee mu,
aburopata nso ho nni mfasoɔ,
ɛfiri sɛ nnuane no ahye.
18Sɛdeɛ anantwie su!
Na anantwikuo kyinkyini kwa.
Nnwankuo mpo rebrɛ
ɛfiri sɛ wɔnni adidibea.
19Awurade, wo na mesu frɛ wo,
ɛfiri sɛ ogya ahye ɛserɛ so adidibea
na ogyaframa ahye mfuo no so nnua nyinaa.
20Wiram mmoa mpo pere hwehwɛ wo.
na ogya ahye ɛserɛ so adidibea.
ASCB : Yoɛl 1